Marine Le Pen oo wacad ku martay in hadii la doorto ay kala diri doonto waaxda socdaalka - BBC News Somali
Marine Le Pen oo wacad ku martay in hadii la doorto ay kala diri doonto waaxda socdaalka
Iyadoo lix maalmood ay ka dhiman tahay codeynta doorashda Faransiiska, ayaa musharraxa Marine Le Pen waxaa cadaadis xoogan oo isasoo tarayaa uu ka soo wajahayaan mucaaradkeeda, hase yeeshee Marine Le Pen ayaa ololaheeda ku xoojisaneysa arrinta muhiimka ee waaxda socdaalka.
Waxa ay u sheegtay in dad isugu soo baxay magaalada Paris iay hakineyso dhamaan waaxda socdaalka ee dalka Farnasiiska, si looga hortago waxa ay ugu yeertay xaalad waali ah oo aan la xakameyn karin, iyo in ay ogolaaneyso dajinta sharciyo cusub hadii loo doorto madaxweyne.
Marine Le Pen ayaa waxay sheegtay in waxa dhacay aysan ahayn wax ka yar wixii la soo arkay xiliigi ilbaxnimada Faransiiska ay billabatay.
Taageerayaasha Ms Le Pen ayaa u arka in ay ka miisaan culus tahay mucaaradkeda balse tartanka ayaa aad u adag.
Dadka ka faalooda arimaha Faransiiska ayaa sheegaya in Fransiisku uu marayo xaalad adag, iyada oo sedex meelood codbixiyayaasha aysan weli go'aansan dhanka ay u codeynayaan waxaana adag saadaalinta natiijada doorasho.
TOOS Khasaaraha ka dhashay dagaalkii cuslaa ee ilaa shalay ka socday Gurriceel
Ninka xuddunta u ah xurgufta ka dhexeysa Erdogan iyo reer galbeedka
Maxaa keenay in maroodigan ay foolasha u soo bixi waayaan?